३० वर्ष पुगेका हरेक महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्छ यी ५ परिक्षण, तपाईले गराउ बिर्सनुत भएन ? – Enepali Samchar
November 19, 2020 adminLeaveaComment on ३० वर्ष पुगेका हरेक महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्छ यी ५ परिक्षण, तपाईले गराउ बिर्सनुत भएन ?
काठमाडौँ । व्यस्त दिनचर्या, उमेरअनुसार शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तनका कारण महिलाको जीवन बढी जोखिममा हुन्छ। पुरुषभन्दा महिलामा हर्मोन बढी मात्रामा गडबड हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा महिला विभिन्न रोगबाट प्रभावित हुने गरेका हुन्। उमेरसँगै हर्मोनमा परिवर्तन आउने हुँदा महिला बढी प्रताडी हुनेगर्छन्। त्यसैले ३० वर्ष उमेर पार गरेका महिलालाई समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने विज्ञहरु सल्लाह दिन्छन्।
बोन डेन्सिटी टेस्ट : उमेरअनुसार हड्डीजन्य समस्या पनि देखापर्छन्। शरीरमा हड्डीको अवस्थाबारे पनि टेस्ट गराउन सकिन्छ । शरीरमा लाग्ने सानातिना चोटपटकले पनि हड्डी कमजोर बनाउनमा ठूलो भूमिका खेल्छन्। शरीरमा हड्डीको अवस्थाबारे थाहा पाउन बोन डेन्सिटी टेस्ट गराउनु आवश्यक छ ।
४५ मिनेटसम्म सुटकेसमा बन्द भएकी नायिका शाहले खोलिन यस्तो राज !
एक युवकको घरमा आकाशबाट खस्यो यस्तो खजना , बेच्दा १६ करोडको मालिक बने…
अनुहारमा चो’टपट’कको दा’ग धब्बा हटाउन चाहानुहुन्छ ?अब कोहि निरास हुनु पर्दैन यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्